बैतडीका विद्यालयमा छात्रा बहोस हुने क्रम बढ्यो !! | सुदुरपश्चिम खबर
बैतडीका विद्यालयमा छात्रा बहोस हुने क्रम बढ्यो !!
बैतडी, १७ चैत – बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका शर्मालीस्थित नागार्जुन माविका छात्राहरु एक्कासी बेहोस हुन थालेपछि समस्या भएको छ । गएको बिहीबारदेखि कक्षा ८ देखि १० मा अध्ययनरत छात्राहरु एक्कासी बेहोस हुन थालेका विद्यालयका प्रधानाध्यापक महामलसिंह साउँदले जानकारी दिनुभयो । विद्यालयमा पुग्ने बित्तिकै छात्रा बेहोस हुने र एकजना बेहोस हुने बित्तिकै अरु पनि बेहोस हुने क्रम बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
एक्कासी बेहोस हुने, बर्बराउने लगायतका लक्षणहरु छात्राहरुमा देखिने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक साउँदले जानकारी दिनुभयो । बेहोस भएका मध्ये कक्षा १० मा अध्ययनरत जमुना कलौनीलाई उपचारका लागि धनगढी रेफर गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘बेहोस भएका मध्ये एकजनालाई उपचारका लागि धनगढी पठाइएको छ । छात्राहरु बेहोस हुँदा विद्यालय सञ्चालनमै समस्या भएको छ ।’
सरकारले नै चारदिनका लागि विद्यालय बन्द गरेको छ । विद्यालय बन्द नभएको भएपनि विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रधानाध्यापक साउँदले जानकारी दिनुभयो ।
छात्राहरुमा देखिने यस्तो समस्या मास कन्भर्सन डिसअर्डर हुन सक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन् । जिल्लाका विभिन्न विद्यालयका छात्राहरुमा यो समस्या देखिएको मास कन्भर्सन डिस अर्डर भएको हुन सक्ने स्वास्थ्य जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख डा वसन्तराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । किशोरीहरुमा यो समस्या बढी देखिने उहाँले बताउनुभयो । मानसिक तनाव, व्यक्त गर्न नसकेका कुरा लगायतका कारणले यो हुन सक्ने उहाँले बताउनुभएको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहका विद्यालयहरुमा समेत यो समस्या देखिएको छ ।
(भगीरथ अवस्थीले रेडियो निङ्गलाशैनीमा लेखेका छन।)
जंगली हात्तीको आक्रमणबाट एक जनाको ज्यान गयो !!